Maitiro eBluetooth Payments arikuvhura kumusoro New Frontiers | Martech Zone
Anenge munhu wese anotya kudhawunirodha imwezve app pavanenge vachigara pasi kuti vadye muresitorendi.
Sezvo Covid-19 yaifambisa kudiwa kwekusabatika kuodha uye kubhadhara, kuneta kweapp kwakava chiratidzo chechipiri. Tekinoroji yeBluetooth yakaiswa kuti igadzirise mafambisirwo emari aya nekubvumira kubhadhara kusingabatike pamatanho akareba, tichishandisa maapplication aripo kuti adaro. Ongororo ichangoburwa yakatsanangura kuti denda rakawedzera sei kutorwa kwemadhijitari ekubhadhara matekinoroji.
Vatengi vana kubva pagumi vekuUS vakachinjira kumakadhi asingabatike kana nharembozha senzira yavo yekubhadhara yekutanga kubvira Covid-4 yarova.
PaymentsSource uye American Banker
Asi tekinoroji yeBluetooth inomira sei pakufambira mberi mune mamwe matekinoroji ekubhadhara asingabatike senge QR makodhi kana pedyo-munda kutaurirana (NFC)?
Zviri nyore: Kugonesa vatengi. Gender, mari, uye nharaunda zvese zvinopesvedzera kuti mutengi anoda sei kushandisa tekinoroji yekubhadhara nhare. Asi sezvo munhu wese achiwana Bluetooth, inopa tarisiro inovimbisa yekusiyanisa nzira dzekubhadhara uye ine mukana wekusvika vanhu vakasiyana. Heano maitiro eBluetooth arikuvhura miganhu mitsva yekubatanidzwa kwemari.
Covid-19 yakachinja zvakanyanya maitiro evatengi kune yekubhadhara isingabatike sekunge kushomeka kwemuviri kuPoints of Sale (Pos) chakava chinhu chinodiwa. Uye hapana kudzokera shure - the kukurumidza kugamuchirwa yedhijitari yekubhadhara matekinoroji ari pano kugara.
Ngatitorei mamiriro acho ne kushomeka kwemamicrochips izvo zvakatokanganisa zvakanyanya kuwanikwa. Zvinoreva kuti makadhi achanyangarika pamberi mari uye, zvakare, izvo zvingave nemhedzisiro yakaipa pakuwana kwevanhu maakaundi ekubhangi. Naizvozvo, pane chimbichimbi chekuvandudza maitiro ekubhadhara izvi zvisati zvaitika.
Zvino, kunyangwe necryptocurrency, pane dichotomy isinganzwisisike. Tine kukosha kwemari yakachengetwa nedigital, asi zvese izvi zvekutsinhana kwecrypto uye wallet zvichiri kuendesa uye kuburitsa makadhi. Tekinoroji iri kuseri kwemari iyi ndeyedhijitari, saka zvinoita sezvisinganzwisisike kuti hapana nzira yekubhadhara dhijitari. Ndiyo mari yacho here? Inconvenience? Kana kuti pasi kusavimbana?
Nepo sangano rezvemari richigara richitarisa nzira dzekuendesa vatengesi masevhisi, havaite senge vachiisa maoko avo pamaterminal. Ndipo panodiwa dzimwe nzira dzekupa zviitiko zvakanaka kumberi.
Iyo tekinoroji yeBluetooth inopa vatengesi uye vatengi kuwanikwa, kuchinjika, uye kuzvimiririra munzira yavanosarudza kuchinjanisa kukosha kune mumwe nemumwe. Chero chekudyira kana chiitiko chekutengesa chinogona kugadziridzwa sezvo pasina chikonzero chekudhawunirodha akasiyana maapplication kana kutarisisa kodhi yeQR. Nekudzikisa kupokana, zviitiko izvi zvinova nyore, zvinosanganisirwa, uye zvinosvika kune vese.
Ubiquity Mukati meMarudzi Akasiyana Emawoko
Pakuona misika ichiri kusimukira uye nharaunda dzakaderera dzehupfumi nemagariro, zviri pachena kuti dzakambochengetedzwa kubva kumasangano emari echinyakare. Izvi zvinodaro nekuti tekinoroji yeNFC, yakadai seApple Pay, haitsigirwe pamidziyo yese uye havasi vese vanogona kutenga iPhone. Izvi zvinomisa kufambira mberi uye zvinochengeta zvimwe zvimiro uye masevhisi eiyo elite tier ine mukana kune chaiwo magetsi.
Kunyangwe inoratidzika kunge yakajairika maQR macode anoda yemhando yepamusoro kamera uye kwete ese mawoko ane dhizaini nebasa iroro. Makodhi eQR haangopa mhinduro ine ngozi: Vatengi vachiri kufanira kunge vari padyo nekodhi kuti kutengeserana kuitike. Ichi chinogona kunge chiri chidimbu chebepa kana Hardware inoshanda semurevereri pakati pecashier, mutengesi, uye mutengi.
Kumusoro, kwemakumi maviri emakore apfuura, Bluetooth yakagoneswa pane ese ruoko, kusanganisira yakaderera-mhando michina. Uye neizvozvo zvinouya mukana wekuita kutengeserana kwemari neBluetooth, zvichibvumira vashandisi kukwidziridza tekinoroji yaimbove isingasvikike. Izvi zvakaenzana nekupa simba kwevatengi sezvo Hardware inobviswa zvachose uye kutengeserana kunongosanganisira POS yemutengesi nemutengi.
Bluetooth Inounza Mimwe Mikana Yevakadzi
Varume vanoratidza kufarira kupfuura vakadzi uchishandisa chikwama chenhare pamhepo uye kutenga muchitoro asi zvakatenderedza 60% yesarudzo dzekubhadhara dzinoitwa nevakadzi. Pano pane kubviswa uye mukana wakakura wevakadzi kuti vabate simba rematekinoroji matsva, ari kusimukira.
Kubhadhara matekinoroji 'dhizaini uye UX inowanzogadzirwa nevarume uye, tichitarisa kugadzira hupfumi kana cryptocurrency, zviri pachena kuti vakadzi vakasiiwa. Kubhadhara kweBluetooth kunopa kusanganisirwa kwevakadzi vane zviri nyore, zvisina friction, uye zviri nyore kubuda zviitiko.
SeMuvambi wechikuva chetekinoroji yezvemari inogonesa zviitiko zvekubhadhara zvisingabatike, zvaive zvakakosha kuti kuve nevakadzi mupfungwa nezvesarudzo dzeUX, kunyanya mumisika ichiri kusimukira. Isu takanzwa zvakare zvakakosha kuhaya vatariri vechikadzi kuburikidza nekubatana netiweki muindasitiri yekubhadhara senge European Women's Payment Network*.
Mumakore gumi apfuura, chikamu chezvibvumirano zvebhizimusi zvakaenda kune vakadzi vakatanga kusvika kaviri. Uye mamwe eakanakisa maapplication aripo angave akagadzirwa nevakadzi kana kuve nevakadzi vari mukubhadhara maneja mabasa. Funga Bumble, Eventbrite, uye PepTalkHer. Uine izvi mupfungwa, vakadzi vanofanirwawo kunge vari pamberi peiyo Bluetooth shanduko.
Ikozvino kufambira mberi neBluetooth kunogona kutaurirana kubva kumutengesi POS mudziyo, hardware terminal, kana software kune application zvakanangana. Iyo pfungwa yekuti iripo nharembozha yekubhengi app inogona kukwidziridzwa kuti ishanduke pamusoro peBluetooth, yakapetwa neBlue ubiquitous hunhu, inopa mikana kune avo vanobva kwakasiyana magariro ehupfumi, varume, uye kutengeserana.
*Kuburitswa pachena: EWPN Mutungamiri anogara pabhodhi paBleu.
Tags: apple payNoirMAKARALI USBkubhadhara bluetoothcontactlesscontactless kubhadharaCOVID-19cryptocurrencydigital muripodigital kubhadhara matekinorojimisika yakabudaMutambo wekubhadhara vakadzi vekuEuropezvemari tekinorojifintechnhare yekubhadhara mafonimobile kubhadharamobile chikwamapadyo nemunda kutaurirananfcpandemickubhadhara kubhadharapaymentsourcePosQR Codeuxux zvisarudzo